Tolotra fampidirana: Blackview BV8800 amin'ny 225 euros | Vaovao momba ny gadget
Tolotra fandefasana: Blackview BV8800 amin'ny 225 euros fotsiny
Ignatius Room | 10/01/2022 14:00 | Finday
Blackview dia nanolotra ny lokany vaovao ho an'ny 2021 amin'ny faran'ny taona 2022. Miresaka momba ny Blackview BV8800 izahay, terminal iray tonga eny an-tsena miaraka amin'ny sasany. mihoatra noho ny fampisehoana mahasarika sy sandan'ny vola. Mba hankalazana ny fandefasana azy dia afaka mahazo ity fitaovana ity isika 225 euros amin'ny alàlan'ny AliExpress.
Raha mitady finday misy a processeur mahery, fahatsiarovana sy fitahirizana ampy Ary izany koa dia manome antsika fakantsary mahaliana sy bateria mahafinaritra, tokony hojerenao ny zava-drehetra omen'ity fitaovana ity ho antsika sy ny antsipiriany etsy ambany.
Ny Blackview BV8800 vao haingana nampidirina dia ahitana karazana fanatsarana raha oharina amin'ny dikan-teny teo aloha an'ity mpanamboatra ity ary manana ny zava-drehetra ho lasa finday tadiavinao izy io, na inona na inona fampiasanao azy.
Raha mankafy fitsangatsanganana an-kalamanjana ianao dia tokony ho fantatrao fa ny Blackview BV8800 dia misy Fanamarinana MIL-STD-810H fakan-tsary 4, anisan'izany ny fakan-tsary fahitana alina sy ny bateria mihoatra ny 8.000 mAh izay tsy mila manahy momba ny fiampangana azy tsy tapaka ianao.
2 Fakan-tsary ho an'izay ilaina
3 Hery hahazoana fahafinaretana ambony indrindra
4 Batterie mandritra ny andro maromaro
5 Shock and drop resistant
6 Seho 90 Hz
7 Mifanaraka amin'ny Google Play
8 Endri-javatra fiarovana
9 Ankafizo ny tolotra
Rafitra fandidiana Doke OS 3.0 miorina amin'ny Android 11
efijery 6.58 santimetatra - IPS - 90 Hz refresh - 85% ny tahan'ny efijery
Fanapahana ny efijery 2408 × 1080 Full HD +
processeur MediaTek Helio G96
Fahatsiarovana RAM 8 GB
fitehirizana 128 GB
bateria 8380 mAh - Manohana famandrihana haingana 33W
Fakan-tsary aoriana 50 MP + 20 MP + 8 MP + 2 MP
Fakan-tsary eo aloha 16 MP
My Account GPS - GLONASS - Beidou - Galileo
tambajotra GSM 850/900/1800/1900
WCDMA B1 / 2/4/5/6/8/9 miaraka amin'ny RXD
CDMA BC0 / BC1 / BC10 miaraka amin'ny RXD
Fanamarinana IP68 / IP69K / MIL-STD-810H
loko Navy maitso / Mecha Orange / Conquest Black
lafiny 176.2 × 83.5 × 17.7mm
lanja Gramin'ny 365
ny hafa Dual Nano SIM - NFC - Fingerprint sensor - Famantarana tarehy - SOS - OTG - Google Play
Fakan-tsary ho an'izay ilaina
Tsy toy ny mpanamboatra avo lenta maro, izay niraikitra tamin'ny MP 12, Blackview dia manolotra antsika sensor lehibe 50 MP, fanapahan-kevitra ahafahantsika manitatra ny fisamborana rehetra ary mankafy ireo singa rehetra aseho ao.
Ary koa, rehefa manao pirinty, tsy mitovy habe isika fa 12 MP ihany no hitantsika. Ankoatra izany, manana sensor 20 MP ihany koa izy io, sensor fahitana alina izay ahafahantsika maka sary sy horonan-tsary amin'ny toe-javatra maivana rehetra.
Miaraka amin'ireo sensor roa ireo dia mahita a sensor ultra wide zoro, sensor manome antsika zoro fijery 117 degre ary sensor 8 MP izay tompon'andraikitra amin'ny fanamaivanana ny amboaran'ny sary izay alaintsika amin'ny maodely portrait.
Ny fakan-tsary rehetra dia mampiasa Artificial Intelligence mandritra ny fanodinana, mba hanatsarana, tsy ny kalitaon'ny fisamborana ihany, fa koa mba hanafoanana ny tsy fahatanterahana kely.
Eo anoloana, Mahita fakan-tsary 16 MP izahay, fakan-tsary izay misy ihany koa sivana hatsaran-tarehy hanatsarana ny selfies, fampihenana ny tsipika fanehoana, ny tsy fahalavorariana ary ny hafa izay, avy eo, dia voatery foanana foana.
Hery hahazoana fahafinaretana ambony indrindra
Na hankafy ny lalao sarotra indrindra na handrakitra horonantsary tsy tapaka na haka sary, miaraka amin'ny processeur MediaTek Helio G96 tsy hanana olana amin'ny fampisehoana isika.
Miaraka amin'ity fanodinana ity, izay mihoatra ny isa 300.000 ao amin'ny benchmarks AnTuTu, dia hitantsika 8 GB amin'ny karazana fitadidiana RAM LPDDR4x ary 128 GB amin'ny karazana fitahirizana anatiny UFS 2.1.
Na ny fitadidiana LPDDR4X sy ny fitehirizana UFS 2.1 dia manome antsika ny hafainganam-pandehan'ny angon-drakitra sy ny fitantanana ny fampiharana izay dia hisoroka ny fahatarana mahasosotra, lag ary ny hafa fa ao amin'ny terminal tsotsotra kokoa isika.
Batterie mandritra ny andro maromaro
La masina ny bateria sy ny fakan-tsary. Ireo mpampiasa rehetra izay te hanavao ny terminal taloha ho an'ny vaovao dia tokony handray an-tsaina foana ireo fizarana roa ireo. Efa niresaka momba ny fizarana fakantsary etsy ambony isika.
Raha miresaka momba ny bateria isika dia tsy maintsy miresaka momba ny 8.340 mAh natolotry ny Blackview BV8800. Miaraka amin'ity bateria goavambe ity, izay afaka maharitra hatramin'ny 30 andro amin'ny fijanonana, dia afaka manao fitsangatsanganana any ivelany miaraka amin'ny fiadanan-tsaina tanteraka tsy misy tahotra ny ho tafahitsoka.
Ny Blackview BV8800 dia 33W mifanentana haingana, izay ahafahantsika mamaly izany ao anatin'ny 1,5 ora monja. Raha mampiasa lozisialy ambany kokoa isika dia ho lava kokoa ny fotoana famenoana.
Ary koa fanohanana ny fiampangana mivadika, izay ahafahantsika mamatsy fitaovana hafa amin'ny batterie an'ity fitaovana ity amin'ny alalan'ny tariby USB-C.
Tahaka ny ankamaroan'ny fitaovana avy amin'ity mpanamboatra ity, ny BV8800 dia manolotra antsika fanamarinana miaramilaFanamarinana miaramila nohavaozina amin'ny fenitra vaovao, ka mahatonga azy ho tonga lafatra ho an'ireo mpampiasa izay te hanao dia an-kalamanjana.
Ary koa, isaorana ny fakantsary fahitana amin'ny alina, afaka mijery mora foana isika ary tsy mampiasa jiro, raha misy biby manodidina antsika na, tadiavo ny mpikambana ao amin'ny vondrona izay very.
Seho 90 Hz
Ny efijery an'ny Blackview BV8800, dia mahatratra 6,58 santimetatra, miaraka amin'ny vahaolana FullHD + ary ny tahan'ny efijery 85%. Saingy, ny tena mahasarika azy dia hita amin'ny tahan'ny famelombelomana azy, tahan'ny famelombelomana izay mahatratra 90 Hz.
Noho io tahan'ny famelombelomana avo io, ny votoaty rehetra, na lalao na fitetezana amin'ny fampiharana sy pejy web, dia ho hita mivaingana kokoa noho ny fampisehoana mahazatra 60Hz, satria sary 90 isan-tsegondra no haseho isaky ny segondra fa tsy 60.
Mifanaraka amin'ny Google Play
Ao anatin'ny Blackview BV8800 dia hitantsika ny sosona fanamboarana Doke OS 3.0, miorina amin'ny Android 11 ary mifanaraka amin'ny Play Store izy io, izay ahafahantsika mametraka fampiharana misy ao amin'ny fivarotana Google ofisialy.
Doke OS 3.0 dia a famerenana lehibe raha oharina amin'ny Doke OS 2.0. Ao anatin'izany ny fihetsehana fitetezana intuitive kokoa, endrika mora ampiasaina, fametahana mialoha ny fampiharana marani-tsaina, notepad nohavaozina izay manohana ny fanoratana tanana sy ny firaketana memo feo ...
Amin'ny maha terminal tsara mendrika ny sira, ny Blackview BV8800, dia ahitana azy roa sensor ho an'ny rantsantanana tafiditra ao amin'ny bokotra fanombohana sy ny rafitra ny fankasitrahana amin'ny tarehy. Ho fanampin'izany, dia misy bokotra ihany koa izay azontsika amboarina amin'ny fiasa 7 samihafa.
Tsy mety ho very ny puce NFC amin'ity fitaovana ity. Noho ity puce ity, afaka mandoa vola amin'ny orinasa rehetra amin'ny carte de crédit izahay nefa tsy mila mitondra ny kitaponay sy ny fitateram-bahoaka.
Ankafizo ny tolotra
La fanentanana fanombohana izay ahafahantsika mahazo ny Blackview BV8800 ho an'ny 225 euros ihany ny VAT sy ny fandefasana, dia voafetra amin'ny vondrona 500 voalohany. Raha tianao ny zavatra rehetra atolotr'ity terminal Blackview vaovao ity aminao dia aza mieritreritra indroa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » telephony » Finday » Tolotra fandefasana: Blackview BV8800 amin'ny 225 euros fotsiny
Anker dia manambara ny vokatra vaovao ao amin'ny CES 2022
Dreame D9 Max, famakafakana ny mpanadio vacuum robot farany indrindra